Kiiska Caaisha: Ma laga yaabaa in ay rag baxsadeen? - BBC News Somali
Xarunta baaritaanka hidda-sidaha ee Garoowe ayaa ka qeyb qaadatay baaritaanka kiiskii Caa'isha Ilyaas oo kufsi iyo dil loogu geystay magaalada Gaalkacyo.
Hay'adda ayaa baaritaan ku sameysay sida uu falkaasi u dhacay iyadoo adeegsaneysa baaritaan lagu sameeyay raggii la eedeeyay iyo jirka Caaisha Ilyaas.
Hay'adda ayaa laantaa sirdoonka Puntland ay weydiisatay in ay baaraan falkaasi iyagoo adeegsanaya qalabka casriga ah ee ay haystaan.
"Waxaan ka codsanay in la xafido meeshii maydka laga helay waxayna inoo sheegeen in la qaaday", ayuu yiri gudoomiyaha xarunta DNA-ga lagu baaaro ee Garoowe, Cabdirashid Maxamed Shire.
Halkee ku dambeeyaa sharcigii kufsiga ee sannadkii hore la ansixiyey?
Cadeynta ay hay'addan soo bandhigtay ayaa la horgeeyay maxkamadda ugu sareysa Puntland, oo Sabtidii xukun ku riday qaar ka mid ah eedeysanayaasha.
Madaxa hay'adda Baaritaanka hidda-sidaha ayaa BBC Somali u sheegay: "Waxaa weydiisanay in la geliyo mayda qaboojiyaha oo aan la dhaqin, qofna uusan taabanin intaan ka soo safrayno Garoowe oo aan Gaalkacyo ka tagayno".
Image caption Qalabka loo adeegsaday baaritaanka DNA-ga
"Waxaan runtii ka qaadnay saambalo aad u badan. Qaar waxaan ka qaadnay qeybteeda qaaska u ah. waxaan kaloo tijaabo ka qaadnay qeybo muhiim ah, waxaa ka mid ahaa timeheedii, cidiyeheedii iyo qeybo ka mid ah jirkeeda oo dhaawacyo ay ku yaalleen", ayuu yiri Cabdirashid.
Sidoo kale waxaa DNA laga baaray dharkii ay xirneyd Caa'isha markii kufsiga iyo dilka loo geysanayay.
Waxaa tijaaabooyiin laga qaaday raggii lagu eedeeyay in ay kufsadeen Caa'isha ka dibna dilka u geysteen.
"Wax dhaqan ah ma uu sameynayo haddii aadan haysan saambaladii aad soo qaaday wax la barbardhigo", ayuu yiri madaxa hay'adda baaritaanka sameysay.
"Wax yaaabaha cajiibka ah ee inoo soo baxay waxa ay tahay in dhecaan ragga ka yimi inaan meesha laga helin. Taas waxay cadeyneysaa in dadkii geystay kufsiga ay ka taxadareen oo ay is yiraahdeen isticmaala cinjirada la gashdo," ayuu BBC Somali u sheegay Cabdirashid Maxamed Shire.
Cabdirashid, gudoomiyaha hay'adda baaritaanka Hidda-sidaha, ayaa sheegay "Nasiib wanaag waxaan haysanaa meelo kale oo fiican oo aan isticmaali karno. Waxaad ogataa in gabarkasto oo dhibaaato loo geysanayo ay dagaallameyso oo ay iska celineyso ninka dhibka geysanaayo".
Wuxuu tilmaamay in dagaalkaaas uu faaa'iido leeyahay, lana helaayo waxyaaabo muhiim u ah baaritaanka lagu sameynayo kufsiga.